အချစ်နဲ့ ရွေးချယ်မှု .၂
1553 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
အချစ်နဲ့ ရွေးချယ်မှု	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: အချစ်နဲ့ ရွေးချယ်မှု">
Tokyo Medical & Dental University's graduation party
1552 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
မင်္ဂလာပါရှင်...ဒီနေ့ ဦးဥာဏ်တို့ကျောင်းမှာ ပါတီရှိလို့သွားကြတယ်လေ...နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Graduation party ပါ... မိသားစုတွေပါတက်ခွင့်ရှိတာမို့ ကျမတို့ပါတီတက်ကြတာ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၄ကြိမ်ရှိနေပါပြီ.... ပထမနှစ်တွေက ဘွဲ့ယူတဲ့မြန်မာဆရာဝန်တွေ တစ်နှစ်တစ်ဦးရှိနေပေမယ့် ဒီ	read more » Discuss Add this link to... Bury
1552 days ago	(http://feedproxy.google.com)
Maya Bay မှာ ၄၅ မိနစ်ကြာ ရေဆော့ပြီး နောက် ၁၅မိနစ်ကြာ သဘောင်္စီးလိုက်တော့ Pi-Leh Bay ဆိုတာ ကိုရောက်ပါတယ်။ ရေအောက် ကို ငုံ.ကြည့်လိုက်တော့ ငါးတွေ ပြုံ ခဲနေတာ ကို တွေ.ရပါတယ်။ Guide က ၄၅ မိနစ် ရေငုံ. ကိရိယာ တွေ ၀တ်ဆင်ပြီး ဆင်းကြပါလို. ပြောပါတယ်။ သဘောင်္ပေါ်မှ ငှက်ပျောသီး၊ ဖ၇ဲသီး များ ပစ်ချ ပေးလိုက်ရာ... read more » Discuss Add this link to... Bury
1552 days ago	(http://health.ngoinmyanmar.org)
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က ကလေးသွားကျန်	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က ကလေးသွားကျန်">
ပုဂံ နေ့လည်ခင်း နှင့် တောင်တော်ရွှေပုပ္ပါး---သူ ကျမ အား ပုပ္ပါးသို့ လိုက်ပို့ သည်--ပုပ္ပါး တောင် ကလပ် ပေါ် တက်ရင်း--- ဗဟုသုတ ဖြစ်စေ မည့် နတ် ကိုး ကွယ် မှု ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အစွဲ အလန်းများကို ရှင်းလင်း ပြောပြနေသည်။မနုဿဗေဒ ပညာရပ်မှာ တိုတမ် ဆိုတဲ့ စကား အသုံး အနှုန်း တခုရှိတယ်--ြ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar Beautiful New Face Model, Nway Htet San's fashion
1553 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
She is Myanmar new face model girl	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: She is Myanmar new face model girl">
MooTools-JSON Event Calendar: MooGenda
1554 days ago	(http://feedproxy.google.com)
MooGenda is an event calendar script, built with MooTools, that reads events from JSON requests.The calendar supports drag’n drops of events & in every actionaJSON request is sent for instant updates.This MooTools calendar supports3different views:day vie	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: | Bookmarks « previous1...3456789101112...105 next »